‘गाई काट्न पाउँ’ भन्नुको मतलव नेपाली मार्न पाउँ भनेको हो…. – पुरा पढ्नुहोस्……
‘गाई काट्न पाउँ’ भन्नुको मतलव नेपाली मार्न पाउँ भनेको हो….
अस्मिता भण्डारी, महासचिव, विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियहामी नेपाली सदियौंदेखि मिलेर बसेका छौं । मिलेर बसेको देखिनसहनेहरुले जनयुद्ध नामक एक युद्ध चलाइदिए । हाम्रा १७ हजार दाजुभाई दिदीबहिनीलाई हामीले गुमाऔं । अब त्यो अध्याय समाप्त भयो । अब विदेशी एजेन्ट, विदेशी एजेन्सीले नेपालमा कसरी नेपालीहरु आपसमा लडेर मर्छन्, कसरी मार्न सकिन्छ भन्ने सोचेर बसेका छन् । एउटा प्रदेशको एक उपसभामुखले गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको भनेर मिडियामा विषयहरु आइरहेका छन् । यो कति सत्य हो भन्ने त खुल्दै जाला तर यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अनौठो होइन । यो कुनै स्वतस्फूर्त आएको अभिव्यक्ति होइन । यो नियोजित रुपमै अभिव्यक्त गराईएको हो । यो बोली विदेशीको हो ।
वोल्न मान्छे एक बुख्याचा हो । बुख्याचाले आफ्नो मालिकको आज्ञा पालना गरेको मात्रै हो । किनभने हाम्रो देशमा ८४ प्रतिशत हिन्दु छन् । ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका छन् । यति ठूलो जनसंख्यालाई कसैले जनता नै मान्दैन, यति ठूलो संख्याको भावनाको ख्याल गर्दैन भने त्यो व्यक्ति कसरी नेपाली हुन सक्छ ? कसरी नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुन सक्छ ? प्रश्न यति मात्रै छैन, हामी नेपालीहरु आपसमा मिलेर बसेको धेरैलाई मन पर्दैन । १० वर्षसम्म जनयुद्ध चल्दा हाम्रा दाजुभाई मरिरहे । कोही विदेशीले पनि हिंसा समाप्त पार्न सहयोग गरेनन् । उल्टो सामरिक सहयोग गरेर युद्ध भड्काइ रहे ।
अब त्यो युद्ध सकिएको छ । नयाँ खालेको युद्ध कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने धर्मनिरपेक्षता नामक कलंक हाम्रो देशमा भिराइ दिए । विदेशीको जुठोपूरो खाएका, चर्चमा सेल्टर बनाएका, विदेशी भूमिमा बसेर नेपालमा बम पड्काउने पूर्वआतंककारीहरुले आफूखुसीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाए । जनताको हित विपरीत धर्म निरपेक्षता लागू गर्ने ती हाम्रो नेता होइनन्, यथार्थमा विधर्मीहरु रहेछन् । अब त्यही धर्म निरपेक्षको नाममा गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्नेहरु सल्बलाउन थालेका छन् । केही पछि आत्मनिर्णयको नाममा प्रदेशहरुले चाहेमा नेपालबाट अलग हुन पाउनु पर्छ भन्नेहरु पनि निस्कन सक्छन् ।
यस्ता विधर्मी अपराधीहरुको राज रहेसम्म यो देशमा सुख चयन आउँदैन । भीम मल्लकी पत्नीले दिएको श्राप अझै नेपालीले भोग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो देशमा राम्रो गर्छु भन्नेहरुको कहिले भलो भएको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराएर जनताको शासन जनतालाई दिन्छु भन्दा राजसंस्था नै खारेज गर्ने तर मातृभूमिविरुद्ध विष वमन गर्ने, जातजाति, भाषाभाषी, धर्मबीच अफवाह फैल्याउने, द्वेष फैल्याउने तत्वहरुलाई संरक्षण गर्नेहरु रहेसम्म यो देशको भलो हुँदैन ।
गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्नुको मतलव यो देशमा धार्मिक दंगा मच्चाउन पाउनु पर्छ भनेको हो । यो देशमा धार्मिक दंगा भड्कियो भने जुन धर्मको मान्छे मरे पनि मर्ने त आखिर नेपाली नै हो । यसकारण यो धार्मिक सद्भावविरोधी तत्वहरुले विदेशीको पैशा खाएर यस्तो कुविचारहरु समाजमा ल्याउने गर्छन् ।यसकारण म समस्त नेपालीहरुमा आह्वान गर्न चाहन्छु कि यस्तो अभिव्यक्ति यदि कसैले दिएको छ भने वास्तविक दोषी त्यस्तो बोल्ने मानिस होइन, अरु नै कोही छ भन्ने बुझ्नु होला । एक सच्चा नेपालीले बहुसंख्यक नेपालीको भावनामा कुठारघात गर्ने गरी कहिले पनि अभिव्यक्ति दिँदैन । यस्तो अभिव्यक्ति त विदेशीको दलाल, विदेशी एजेन्ट, विदेशीको पैसामा बाँचेका मतिभ्रष्टहरुले मात्रै दिन सक्छ ।
(महासचिव भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
Prevगाईको मासुको बिषय चुलियकै बेला गाइकाण्ड प्रति एडिसनको आयो यस्तो गीत (भिडियो)
Nextआज चैतेदसैँ र रामनवमी मनाइँदैः यसकारण मनाउन थालियो रामनवमी पर्व…
काठमाडौ सडकमा महिलाले हुईकाउने साझा बस, यात्रुहरू सबैलामे गरे खुलेर तारीफ-हेर्नुहोस (भिडियो रिपोर्ट)
बिर अस्पतालमा बेवारिसे भेटिएका बेलायती फिलिपलाई शिशिर भण्डारीले निको पारी बेलायत फर्काउने भए-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नयाँ दिल्लीमा यसरी गरियाे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे स्वागत ! (हेर्नुहोस भिडियो)